Sheekada Hodan: Telefoonki laga so diray Liibiya
“Ma xasuusto taariikhda saxda ahayd ee ay dhacey, laakiin waxay ahayd 4-ta galabnimo. Waxaan la shaqeynayay qaxootiga waxaana uu ku celceliyay taleefan lambar aanan aqoon. Waxaan u maleeyay, 'Waa inaan u jawaabo tan. Ma aha tiro iswiidhish ah ama tiro soomaali ah. Wuxuu sheegay inuu joogo Libya uuna u baahan yahay $ 7,000.
Sheekada Samatar: Wadada qatarta ah ee Yurub
Waxay u muuqatay xitaa in muuqaalka saaxiibbadiisa uu isbedelay: waxay u muuqdeen midab cad sawirada la dhajiyay, wuxuuna doonayay inuu u ekaado sidii ay ahaayeen. Isaga iyo qaar ka mid ah ardayda fasalkiisa ah, dhallinyarda dhammaantood, waxay go'aansadeen inay cararaan oo u safraan Yurub.